अ’कस्मात् भयो मुटु का’पने दु’र्घटना आमा र छोराको घ’टना,स्थलमै मृ त्यु – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/अ’कस्मात् भयो मुटु का’पने दु’र्घटना आमा र छोराको घ’टना,स्थलमै मृ त्यु
अ’कस्मात् भयो मुटु का’पने दु’र्घटना आमा र छोराको घ’टना,स्थलमै मृ त्यु ! अ’कस्मात् भयो मुटु का’पने दु’र्घटना आमा र छोराको घ’टना,स्थलमै मृ त्यु !
राजविराज / पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कल्याणपुरमा गए राति भएको दु’र्घ’टनामा परी दुई जनाको मृ’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेमा सप्तरीको खडक नगरपालिका–५ रंजितपुर निवासी ३० वर्षीय वीरेन्द्र दास र उनकी ५० वर्षीया आमा सुद्धनीदेवी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
यता घ’टनाबारे अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले जनाएको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोपछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बेला बेला केहि न केहि भाईरल भैरहेका छन् । सामान्य व्यक्ति देखि कहिले कलाकार, कहिले पत्रकार, कहिले बाबाजी लगायत अन्य धेरै कुराहरु भाईरल भैरहेका छन् । यस्तैमा हालै समाचार बाचिका सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भैरहेकी छन् । उनि सौन्दर्यताको कारण भाईरल भैरहेकी छन् ।